Oromo Free Speech: Bulchiinsii Amerikaa Ganna 15tti Itoophiyaa Waliin Biyya Afrikaa Jaha Elektirikiin Walin Gahuuf Hujiitti Jira
Bulchiinsii Amerikaa Ganna 15tti Itoophiyaa Waliin Biyya Afrikaa Jaha Elektirikiin Walin Gahuuf Hujiitti Jira
Afrikaatti nama harka 75 eletirikii abdatan hin qabne harkii 85 ammoo tana arg
achuu dhiisii ittuu hin dhihaatu. Biyya haga tokkotti ammoo elktirikiin hammaachaa jireenna namaa harka shan faan diqqeessiti.
Baaddiyaa biyyoota Afrikaa Gammoojii Sahaaraatii gadii jiran jahatti ammoo nama miliyoona 240 ibsee hin qamne. Awurooppaa fi Amerikaan faan ammoo guddoo bisiti.
Mootummaan Perzdaanti Obaamaa sagatana isaa Power ‘Initiative Africa’jedhaniin biyyoota Afrikaa jaha ganna 15 keessatti dukkana hamtuu akkanaati baasaa jedhee hojjachuutti jira. Karoora kana doolara ufii baase dooalra biliyoona torba caaltu alatti waliin doolara biliyoona 26 hojjachuutti jira.
Biyyootii karoorii kun baheef jedhan Itoophiyaa, Gaanaa, Keenyaa, Laaybeeriyaa,Naayjeeriyaa fi Tanzaaniyaa.Afrikaan ibsee dhabdee maan taate,karoorii kun hagam isii gargaara?Biyyoota tana keessaa tamtii irra faay aa argata?
Porofeeserii yuniversitii university San Diego ka barumsa ‘Mechanical Engineering’ fi gorsaa barattoota barumsa PhDti tahee hojjatu,porofeeser Asfawu Beyyenee maan jedha?
Qorannoon isaa hagii guddaan akka humna ibsee ta hin dhumanne ta akka ibsee, bisaanii, aduu, bubbee fi waan akkanaa kanaan hojjachu dandahanii fi humna ibsee ta lafa keessaa fi qilleensa keessaalleen hojjachuu dandahan qorata.Afrikaan ibsee dhabdee humna ibsee dhabuun maal dhabde?Mee kutaa duraa caqasaa.